Ogaden News Agency (ONA) – Hay’da FAO ee Qaramada Midoobay oo Sheegtay in 8-milyan oo Itoobiyaan Ah Ay Cunto Yaraan Ba’ni Soo Foodsaartay.
Hay’da FAO ee Qaramada Midoobay oo Sheegtay in 8-milyan oo Itoobiyaan Ah Ay Cunto Yaraan Ba’ni Soo Foodsaartay.
Posted by Dayr	/ June 10, 2015
Warbixin ay soo saartay Hay’ada Qaramada Midoobay uqaabilsan cuntada aduuna ee layidhaahdo Food and Agriculture Organization (FAO) ayaa lagu sheegay in qiyaastii 8-milyan oo Itoobiyaan ah ay macaluul ba’ni soo foodsaartay. Sida warbixinta lagu sheegay roob yari iyo abaaro laxaad leh oo kuhabsaday deegaamo kamid ah Itoobiya ayaa macaluul daran laga soo sheegayaa. Waxaynu la wada soconaa in ay Itoobiya tahay wadanka aduunka uugu badsada macaawimooyinka ay wadanada reer galbeedku ugu deeqaan wadamada dunida ugu saboolsan.
Sida warbixintu sheegayso gobolada Somalida Ogadenya iyo Canfarta ayaa kamid ah kuwa oogu daran ee macaluushan looga cabsi qabo ineey shacabku cunto yari awgeed u lee’daan. Wadankan Ogadenya ayaa waxaa udheer cunto yarida ay FAO sheegtay cuna qabatayn mudo dheer lagu hayay shacabka Somalida Ogadenya.
Dhanka kale warbixin ay dhawaan soo saartay hay’ada Qaramada Midoobay uqaabilsan horumarka ee marka lasoo gaabiyo looyaqaano UNDP oo sanadkiiba hal jeer qiimayn kusamaysa horumarka iyo kobaca dhaqaalaha aduunka ayaa qiimayn ay samaysay lagu sheegay ineey Itoobiya noqotay wadanka 173-aad taasoo kadhigaysa ineey Itoobiya kamid tahay sadexda wadan ee aduunka oogu liita xaga kobaca dhaqaalaha. Warbixinta UNDP ayaa sheegtay in gobolada Somalida Ogadenya iyo Canfarta ay oogu liitaan xaga horumarka guud ahaan Itoobiya. Warbixintan oo meelo badan taabanaysa ayaa aad looga dayriyay horumar la’aanta labadaas gobolka kajirta.
Waxaa iswaydiin mudan sababta keentay ineey Itoobiya sheegato horumar xawaare sare kusocda dhanka kalana ay hay’adaha caalamiga ah beesha caalamka gargaar banii’aadamnimo usoo waydiiyaan? Xagee kabaxay horumarka ay Itoobiya fagaareyaal caalami ah kasheeganayso iyadoo shacabkeedii macaluul iyo cunto yaraan laxaad leh ay soo foodsaartay? Jawaabaha su’aalahan waxaan ooga tagaynaa akhristeyaasha ONA ee sharafta badan.